तामाङ भाषाको क्षेत्रीय भेदहरूको भाषावैज्ञानिक सर्वेक्षण २०२१ प्रारम्भ - Fonij Korea
तामाङ भाषाको क्षेत्रीय भेदहरूको भाषावैज्ञानिक सर्वेक्षण २०२१ प्रारम्भ
लेखक: अमृत योञ्जन तामाङ | प्रकाशीत मिति: February 26, 2021
तामाङ भाषा नेपाल र नेपालबाहिर भारतको उत्तर-पूर्वी राज्यहरू (पश्चिम वंगाल, सिक्किम, आसाम, नागालैंड), भूटान र म्यानमार आदि देशमा पनि फैलिएको छ। तामाङ भाषीहरू नेपालमा विशेष गरी बागमती प्रदेशमा केन्द्रित छन् र गण्डकी प्रदेश, प्रदेस नं. २ र प्रदेस नं. १ मा पनि बाक्लो बसोबास पाइन्छ। यस भाषाको के कति क्षेत्रीय भेद र उपभेदहरू छन् (यसलाई ‘भौगोलिक भेद’ पनि भन्न सकिन्छ र परम्परागत रूपमा ‘भाषिका’ भनिन्थ्यो), यसबारे हालसम्म भाषावैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान खासै हुनसकेको छैन। आजको सन्दर्भमा कुनै पनि भाषाको क्षेत्रीय भेदहरूको भाषावैज्ञानिक अध्ययन हुन आवश्वक छ।
यस प्रकारको भाषिक सर्वेक्षण‍बाट भाषाको स्थानीय भेदहरूको जानकारी हुनका साथै शिक्षामा यसको प्रयोग विस्तार गर्न हुन्छ र सञ्चार (रेडियो, टेलिभजन, छापा आदि)मा पनि। साहित्य सिर्जना र सरकारी कामकाजको भाषाको लागि मानक भेदको विकासमा पनि सर्वेक्षणले टेवा पुग्दछ।
तामाङ भाषिकाको १) वर्णको तहमा २) शब्दको तहमा ३) व्याकरणको तहमा र ४) वाक्यको तहमा सर्वेक्षण गरिने छ। यस सर्वेक्षणमा तामाङ भाषाको हरेक पक्ष र तहको सर्वेक्षण गरिने प्रयास गरिने छ। यस प्रकारको सर्वेक्षणबाट तामाङ भाषाको क्षेत्रीय भेद तथा उपभेदहरूको सङ्‌ख्या थाहा हुनका साथै भाषिकाको भौगोलिक दूरी र क्षेत्र पनि थाहा हुनेछ, स्थानीय तहका विद्यालयहरूमा स्थानीय मातृभाषा पठन-पाठनमा सहयोग पुग्नेछ, स्थानीय भेदमा पाठ्य पुस्तक र पाठ्यसामग्री तयार गर्न सहयोगी हुनेछ र बोधगम्यताको जानकारी हुनेछ र मानक भाषाको विकासमा समेत टेवा पुग्ने छ। तामाङ भाषीहरूको मूल थलो, यसको वितरण र माइग्रेसन पनि थाहा हुनेछ। तामाङ भाषाको प्राचीनतम् रूपको पनि सर्वेक्षणबाट जानकारी हुनेछ।
नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको सहयोगमा तामाङ भाषाको भाषावैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रारम्भ भइसकेको छ। यसको लागि तामाङ भाषा सर्वेक्षण प्रश्नावली फेसबुक समुहमा राखिएको छ। कतिपय उत्साही तामाङ मातृभाषीहरू समुहमा सहभागी भइ प्रश्नावली डाउनलोड गरेर, आफ्ना क्षेत्रको स्थानीय भाषा भरेर पठाइसकेका पनि छन्। तपाई पनि आफ्ना क्षेत्रका तामाङ भाषाको भाषावैज्ञानिक जानकारी राख्न चाहनु हुन्छ भने समुहमा संलग्न भएर सर्वेक्षणका लागि सहयोगी बन्नु होस् र प्रश्नावली डाउनलोड गरेर भरेर पठाउनुहोस्। यो सर्वेक्षण एक प्रकारको जनस्तरबाट तयार गरिएको पब्लिक सर्वेक्षण हुनेछ। प्रत्येक क्षेत्रीय भेदको विस्तारका साथ अध्ययन गरिनेछ। थप कुराको जानकारी समुहमा गराएको छ।
तामाङ भाषा सर्वेक्षणमा सहयोगी हुन तयार होऔं, आ-आफ्ना भाषाको भाषावैज्ञानिक जानकारी राखौं र प्रयोग विस्तार पनि गरौं।